‘ललितानिवास जग्गा प्रकरण आझेलमा पर्दैन्, जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नतिजा आउँछ’ – newslinesnepal
‘ललितानिवास जग्गा प्रकरण आझेलमा पर्दैन्, जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नतिजा आउँछ’
प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७६, बुधबार १५:२४
काठमाडौं, २२ साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमा अर्यालले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तीन वटा निकायबाट छानबिन तथा अनुशन्धानको काम भैरहेकोले सरकारले यो प्रकरणलाई ओझेलमा नपार्ने स्पष्ट पारेकी छिन् ।
मन्त्री अर्यालले नेपालका सिमा स्तम्भको बारेमा जसरी बाहिर हल्ला आएको छ त्यस्तो अवस्था भने अहिले नरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्,‘यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभागमार्फत अनुगमन भैरहेको छ । जसरी बाहिर सिमा स्तम्भ हराएको हल्ला आएको छ, त्यस्तो अवस्था होईन ।
आफूहरु आधुनिक नेपाल निर्माणको अभियानमा जुटिसकेको पनि उनले जनाईन् । उनले भनिन्,‘हामी आधुनिक नेपाल निर्माण अभियानमा अघि बढिसकेका छौं । जग्गाको नाप, नक्शापनि अब जि.पि.एस.एस. प्रविधिअनुसार हुन्छ । यो कोअर्डिनेटर प्रविधिको प्रयोग हो । डाँडामा राखेर जमिनको अवस्था के छ, कतिपटक हल्लियो भनेर हेर्न सकिन्छ । यही प्रविधि हामीले सगरमाथाको उचाई मापनमा प्रयोग गरेका थियौं । वरिपरि राखेर ६ ठाउँबाट हेर्यौं । चुचुरोमा राखेर अब्जर्भेशन गर्यौं । अब प्रोसेङिको काम भैरहेको छ ।’ यो प्रविधि नेपालका विभिन्न भागमा १ सयदेखि १५० स्थानमा स्थायी रुपमा राख्ने तयारी भएको पनि उनले जनाईन् ।
उनले अब जग्गाको कित्ता, नापी पनि डिजिटल नापी (टोटल स्टेरेशन) बाट नाप र नक्शाको काम गरिरहेको पनि विश्वास दिलाईन् । उनले भनिन्,‘यो सिष्टम लागुसँगै जैविक प्रकोपको बारेमापनि पनि सूचना दिन्छ । यो अत्यन्तै उपयोगी प्रविधि हो ।’ आफुहरुले जग्गाको कित्ता, नापी डिजिटल नापीको सुरुवात गरेको पनि उनले जनाईन् । उनले भनिन्,‘यसले जमिनको सतह निमेलेको ठाउँपनि सिधा देखाउँछ ।’
त्यस्तै भिरालो भएपनि सिधा यही सिष्टमले देखाउने र त्रुटि हुने सम्भावना पनि नहुने उनले स्पष्ट पारिन् । उनले लाईडरको व्यवस्थाले पनि जमिनको अवस्था हेर्दा के कस्तो छ भन्ने कुरा देखिने जनाईन् । उनले भनिन्,‘यो लाईडर प्रविधि भनेको मानिसको स्वास्थ्य अवस्थाको जाँच गर्दा प्रयोग गरिने एम.आर.आईजस्तै हो । अहिले एउटा प्रदेशबाट यो प्रविधि सुरु हुँदैछ ।’
त्यस्तै, उनले स्याटलाईट ईमेजको पनि प्रयोग गर्न लागिएको सुनाईन । उनले भनिन्,‘जमिनको सतहको अवस्था के कस्तो छ? भनेर यसले देखाउँछ । जमिनको सतहमा नभई हेर्न सकिन्छ । अफिसबाट वा कुनै ठाउँबाट पनि यो हेर्न सकिन्छ । यो चीन सरकारबाट सहयोग प्राप्त भएको हो ।’
नेपालको महत्वपूर्ण पुँजी भनेको नै भूमि भएकोले यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र समुचित उपयोग गर्नेगरि सरकार अघि बढिरहेको उनको भनाई छ । अब नयाँ प्रविधिको विकास भएकोले सोही सिष्टमबाट नै नेपालका सरकारी जग्गाको सरंक्षण गर्नसकिने पनि उनले बताईन् ।
मन्त्री अर्यालले सहकारीको हकमा आएको नयाँ नियामावलीले सन्दर्भ व्याजदर यही सरकारले पहिलोपटक निर्धारण गरेको दाबी गरिन् ।
उनले भनिन्,‘सहकारी संस्थाले ऋण दिँदा १६ प्रतिशतभन्दा बढि लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । बचत र ऋणको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नदिने र अनुगमनको लागि एकीकृत निर्देशिका बनाएका छौं । यसको लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघले अनुगमन गर्छ ।’
त्यस्तै उनले आफूहरुले सहकारीको मर्जर (एकीकरण) गर्नेपनि सुनाईन् । वचत ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको छुट्टै ऐन बनाउनेपनि उनले जनाईन् । उनले आगामी पाँच वर्षभित्र सहकारीको संख्या ५० प्रतिशतमा झार्ने पनि जानकारी दिईन् । सहकारीको सेवा प्रवाहको पाटोपनि सुधार गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाई छ ।